myanmar | Mg Ogga's Notes
နံနက်ခင်း ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က သင်တန်းသားတွေကို သြဝါဒပေးပြီး ကျနော် ဆွေးနွေးရမဲ့ အလှည့် ရောက်လာတယ်။ လူတွေက ညတုန်းက မိတ်ဆက်ထားတဲ့ သူတွေကော နောက်မှရောက်လာတဲ့ သူတွေကော။ သင်တန်း ထုံးစံတိုင်း မိတ်ဆက်၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရည်မှန်းချက်တွေပြော နောက် အသင်းအဖွဲ့တည်တောင်တာတို့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်တာတို့ လုပ်ပေါ့။ လုပ်ရင်း လုပ်ရင် သင်တန်းသား တွေကို ပံ့ပိုးကူညီမှု (Facilitation) အကြောင်းလေးတွေပြန်စဉ်းစားဖြစ်တယ်။ အရင်က Facilitation ကို သိပ် နားလည်လှတာ မဟုတ် အခုလည်း သိပ်မသိဘူး ရေးတေးတေးနားလည်ရုံသာ ရှိတာ။ ဒါကလည်း ဆရာသမား တွေ ဖြစ်တဲ့ ဆရာသက်နိုင်၊ ဆရာဘို၊ ဆရာမမိငွေလေး၊ အဂျန်ပရာချာ၊ ကိုသုမောင်၊ ကိုကျော်စိုး၊ ပပတို့ က အကောင်လိုက်ချပြမှ…
July 2, 2013 in ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလေးတွေ, ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ခံစားမိသမျှ, အတွေ့အကြုံ, ဆောင်းပါး.
သာသနာ့ရေသောက်မြစ်ကြီး အရေး အပိုင်း ၃
ပရိယတ္တိ သာသနာတော်အကြောင်းရေးရင်းရေးရင်း ဖေဘုတ်က ကွန်မန့်တွေကို ကြည့် ရင်း ရေးရတာ အားရပါတယ်။ အမြင်တွေ ဘယ်လိုပင်ကွဲကွဲ သာသနာတော်ကို ရေရှည်တည်တံစေချင်တာ လူတိုင်းပါပဲ။ ရှုမြင်တာ မတူလို့ အမြင် ယူဆပုံလည်း ကွဲလာကြတာပေါ့လေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စလေးကို အရေးတယူရှိပြီး ဝေဖန်ပေးကြတော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုအပိုင်းက နောက်ဆုံးပိုင်းပါ စိတ်ယဉ်ကျေးမူပိုင်း ဘာသာရေးကိစ္စမှာ တလွဲ ဆံပင်ကောင်းတာတွေ တတ်သလောက် မှတ်သလောက်ရေး ရေးသွားပါမယ်။ကျနော်ရဲ့ အတ္တမနောဟိ မကင်းတာမို့ အမှားပါရင် ဝေဖန်ပေးကြဖို့ လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ မောင်ကြီးတစ္ဆောကြောက်တယ် တစ်ခါက ဖတ်ဖူးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမူ မနုဿဗေဒဆိုင်ရာ ကျမ်းတစ်ခုအကြောင်း ဆရာတစ်ယောက်ဆီကနေ ကြားဖူးပါတယ်။ ဒီကျမ်းက ဗြိတိသျှ လူမျိုးတစ်ယောက်ရေးထားတာပါ။ လူမျိုးခြားဆိုပေမဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်အမြင်နဲ့ သေသေချာချာ စစ်တမ်းထုတ်ပြီး…
June 27, 2013 in ဘာသာရေးရာ, ဆောင်းပါး.
သာသနာ့ရေသောက်မြစ်ကြီး အရေး အပိုင်း ၂
ဒီပိုင်းကတော့ ကိုဝိပြောထားတဲ့ ဒုတိယပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယပြဿနာက ပရိယတ္တိ သာသနာ့ဝန်ဆောင်သံဃာတော်တွေဟာ နေစရာစားစရာပေးပြီး စာသင်စာချလုပ်နေရပေမဲ့ လူတွေက ဒါကို လူတွေက ပရဟိတလုပ်တယ်လို့ ဘာကြောင့် မထင်ကြတာလဲ မသတ်မှတ်ကြတာလဲ။ ပရိယတ္တိစာသင်စာချကိုယ်တော်တွေ ကို ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတဲ့ သူတွေ လို့ မထင်ဘူးလားဆိုပြီး မေးရင် လူတိုင်းက လုပ်နေပါတယ် ဒါလဲ ပရဟိတလို့ ကိုဝိ ဖေဘုတ်က ကွန်မက်တွေ ကိုကြည်ပြီး သိနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒါဟာ ဝေါဟာရ ပြဿနာမဟုတ်ပါ။ လူတိုင်းက မေးရင် ပရဟိတ ပါပဲလို ထင်ပေမဲ့ စိတ်ယဉ်ကျေးမှု အရ လက်တွေလူမူဘ၀အရ ပရဟိတ ကို ပရိယတ္တိသာသနာဝန်ဆောင်ကိုယ်တော်တွေ လုပ်နေပါတယ်လို့မျထင်ကြတာ အသေအချာပါပဲ။ ပရိယတ္တိလုပ်ငန်းတွေမှာ ပရဟိတ သဘောပါဝင်ပြီးသားပါ သံဃာတော်တွေ ကိုရင်တွေ ကို…
အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲပြီးကာစ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တစ်သိုက် ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေကိုဘာများ ပါမလဲ သဲကြီးမဲကြီး လေ့လာနေတဲ့ ကာလဖြစ်သည်။ လေ့လာနေရင် အခွင့်အရေးတစ်ခု ပေါ်လာသည် CE Civil Education Multiplier သင်တန်း တတ်ခွင့်ရလိုက်သည်။ Multiplier ဆိုတာ အမြင့်ဖွင့် အခြေခံအဆင့်လောက်လည်းမဟုတ် ဆရာဖြစ် သင်တန်း ToT လို့လည်း မမြင် ဒီနှစ်ခုကြားက အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ သင်တန်းတတ်သူများ က ဗမာမဟုတ်သည့် တိုင်းရင်းသား များသည်။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်ကွန်ရက် က ကျွန်တော်ရယ် ပပ ရယ် တတ်ခွင့် ရသည်။ ပပ ကလည်း မွန်ဗမာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်သာ ဗမာပါသည်။ နောက် သင်တန်းမှာ ကိစ္စတစ်ခု အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးစရာတစ်ခု…
June 26, 2013 in ဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး.
တနေ.သောအခါ နိုင်ငံတကာပညာရှင်များ အစည်းအဝေးတွင် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး သမိုင်းပညာရှင်ကမြန်မာနိုင်ငံ၏ပုဂံအကြောင်းစာထမ်းဖတ်ကြား သွားသည်။အမေရိကန် မနုဿဗေဒပညာရှင်ကလည်းပုံတောင် ပုံညာ ပရိုင်းမတ်များအကြောင်း ပြောသွားသည်။ ဂျာမန် ဘောဂဗေဒပညာရှင်က မြန်မာစီပွားရေးကြောင်း ပြောသွားသည်။ ပြင်သစ် ပန်ချီပညာရှင်က မြန်မာရှေးပန်းချီကြောင်းပြောသွားသည်။ မြန်မာ ပညာရှင် က ထ၍ ထိုသူများကို လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ကာ ကျေးဇူးဥပကာရတင်ရှိကြောင်းပြောသွားသည် မြန်မာရေ သိတယ်မလား 🙂
January 25, 2009 in ဟာသသရော်စာ.